Ronzamabwe - Wikipedia
(Redirected from Ketamabwe)
Shoko rokuti ronzamabwe (Petrology kuChirungu) riri kushandiswa pano kureva denhe reruzivo rinodzidzisa pamusoro pemabwe, kuwumbwa kwawo uye kupatsanurwa kwemapoka emabwe. Kune mhando dzemambwe nhatu dzinoti echikwatamabwe (ignenous), akawumbwa kubva pakutsindirana kwemadzikinyira (sedimentary), uye akashandurwa chimiro nehujoto nepuresha yakakwira (metamorphic).
Shoko rokuti kuronza (to tell, explain, relate) zvichireva kutaura kana kutsanangura. Saka tikati ronzamabwe zvinoreva kuti chidzidzo ichi chasvika pakajeka uye panonzwisisika maringe nemashandiro enhengo dzechikadzi. Shoko chairo richapfumbira harisati ranatsa kubuda pachena, parizvino Shoko rokuti ronzamabwe rinodudzira zvimwechete nokuti duramabwe.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Ronzamabwe&oldid=51760"
This page was last edited on 10 Gunyana 2017, at 19:27.